Apple inosimbirira vashandi vayo pakupera kwetereworking munaGunyana | Ndinobva mac
Ichokwadi kuve iri sipo yakanyanya opera neApple nevashandi vayo. Kubva kukambani ivo vanoramba vakasimba muchisarudzo chakaitwa pane dzokera kubasa kwemwedzi waGunyana kune vese vashandi vako uye nekudaro kupedza foni iyo zviuru zvavo zvinoramba zvichiita. Vazhinji vevashandi ava vari kupokana nedanho iri uye pakange paine zvichemo zvakawanda pamusoro pazvo izvo zvakatosvika kuna CEO wekambani, Tin Cook.
Pakutanga kwemwedzi uno, Cook pachake akatumira tsamba yemukati kuvashandi vachitsanangura hurongwa hwekambani hwekudzoka kubasa mumunhu kwemazuva matatu pasvondo munaGunyana unotevera. Izvi zvinoita kunge zvisiri kugamuchirwa zvakanaka nevashandi kunyangwe zviri pachena kudzoka kubasa izvo zvinopfuura mumwe wedu angade, asi pakupedzisira ivo vari mukati mekodzero yavo yekunyunyuta uye vakaita saizvozvo kana kuti vazvizivise kukambani pachayo mushure mekuzivisa.
Izvo Deirdre O'Brien, akapindura zvakare zvichemo nevhidhiyo yakatumirwa kuvashandi uye yakaburitswa pane inozivikanwa svikiro, Iyo Verge. Mutevedzeri wapurezidhendi weApple wezvekutengeserana nevashandi vakati kushanda mumunhu "kwakakosha" kuti uenderere mberi nekuvandudza zvigadzirwa zveApple uye tsika yekambani uye kuti chinhu chakakosha pakuvhurwa nekusimudzirwa kwezvigadzirwa zvitsva.
Ehezve, mamiriro akadaro akange asati ambosangana neApple uye zviri pachena neimwe kambani yazvino tekinoroji, asi pakupedzisira chakakosha chinhu apa kusimbisa hukama hwepedyo sezvinobvira kuhupenyu hwemhuri nebasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Apple inosimbirira vashandi vayo pakupera kweterevhizheni munaGunyana
Apple TV + Inogamuchira 19 Masikati Emmy Mubairo Kusarudzwa